FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BUGG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bugg
Alika mifangaro mifangaro Pug / Boston Terrier
Murphy the Bugg (1/2 Boston Terrier 1/2 Pug) alika amin'ny 6 volana
Tsy alika madio ny Bugg. Lakroa misy eo anelanelan'ny Pug ary ny Boston Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona mpamorona = Buggs
Mpanoratra International Canine Registry®= Bugg
Jake the Boston Terrier / Pug mifangaro amin'ny 10 volana nipetraka teo amin'ny toeran'ny mpandeha Jeep iray— 'Izy io dia ilay fiara kelintsika kely. Tiany ny matory ao, mandeha mitaingina jip, mivoaka amin'ny rindrina rehefa milalao. Tena milalao izy ary be fitiavana fa tsy fotoana manjavozavo miaraka aminy velively. Miditra amin'ny entana foana. Ny sasany amin'ny fahazaran-dratsiny dia mitsako sy milelaka ny zava-drehetra. ”
'Ity no Lucie mahafinaritra antsika, ilay Bugg antsika amin'ny faha-3 taonany. Ity dia sary nalaiko tao amin'ny valan-javaboary iray any Laval, Canada. Tonga dia raiki-pitia tamin'ity atleta 20 pounds 2 taona sy tapany lasa izay. Vao nilaza ny atleta aho satria afaka mitsambikina avo 4 metatra ity alika ity. Ampianariko ihany koa izy hilalao maty, dimy taona, handihy ary hiteny. Alika tena manan-tsaina, azo antoka. Lavorary ho an'ny ankizy izy, na dia milalao ady aminy aza aho, dia avadiny tanteraka ny fomba filalaovany rehefa manodidina ny ankizy. ”
'Butch dia hybrid Boston Terrier / Pug aseho eto amin'ny faha-7 taonany. Betsaka ny mpiompy no miantso ny zanak'i Butch ho Bugg na Buggs, na dia niantso azy ho Pugin aza ny mpiompy Butch. Butch dia biby mpanompo efa ho 4 taona izao ary tena hainy tokoa. Butch tsy manao zavatra maditra. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia anjely kely lavorary izy, nefa ataon'i daddy antoka fa tsy manadino izy! Butch dia nanampy fitiavana be dia be tsy ho an'ny fiananay ihany, fa ny fiainan'ny fianakavianay manontolo. Tsy afaka nangataka zavatra bebe kokoa tamin'i Butch izahay, baolina kely fitiavana sy fandriam-pahalemana fotsiny izy. '
Nicky the Bugg (hybrid Boston Terrier / Pug) amin'ny taona 1 ½ taona dia mitaky zavatra bebe kokoa aorian'ny reniny (the Boston Terrier) noho ny dadany (the pug). 'Tsy fantany fa alika izy. Izy no sakaizan'ny zanako vavy indrindra. '
Harley the Bugg (Boston Terrier / Pug mix) alika kely
Dolly the Bugg amin'ny faha-6 volana
'Lola no anarany. Izy dia showgirl :). Vehivavy manjaka izy nefa manana tanana ho an'ny olona sy ny ankizy foana. Mpiambina kely tsara. 20 pounds izy amin'ny 2 taona. '
Hijery ohatra hafa momba ny Bugg
Sarin'i Bugg 1
Bugg Sary 2
Bugg Sary 3
sarin'alika alika omby anglisy
sarin'ny alika whippet
ohatrinona no lehibe azon'ny bulldog anglisy
laboratoara afangaro amin'ny alika wiener
king charles cavalier sy bichon